Tian'ny mpanjifanao ve ianao? | Martech Zone
Alarobia, Febroary 12, 2014 Talata, Febroary 11, 2014 Douglas Karr
Tian'ireo mpanjifanao ve ianao? Ny angona fanadihadiana vaovao avy amin'ny Responsys dia manambara ny fomba ahafahan'ny marika mitazona fifandraisana lava amin'ny mpanjifa ary hisorohana ny tsy ilaina vokany.
Ny fikarohana Responsys dia mampiseho fa ny mpanjifa dia milentika amina marika rehefa ampahany amin'ny hafatra ny traikefa mpanjifa namboarina miseho izany rehefa mandeha ny fotoana, manerana ny fantsona ary arakaraka ny fihetsiky ny olona sy ny tiany. Miaraka amin'ny paikady sy vahaolana mety, ny fifandraisan'ny mpanjifa rehetra dia mety ho fiandohan'ny fifandraisana mahafinaritra.
Ny valim-pikarohana lehibe tamin'ny fanadihadiana dia ahitana:
73% ny mpanjifa te hanana fifandraisana maharitra amin'ireo marika izay omeo valisoa izy ireo amin'ny maha mpanjifa mahatoky azy ireo.
32% ihany no milaza ny marika tiany ihany mandefa tolotra / fampiroboroboana izay mahaliana azy ireo.
34% amin'ireo olon-dehibe amerikana no milaza fa manana izany tapaka miaraka amin'ny marika noho ny mahantra, manakorontana na marketing tsy misy dikany hafatra nalefa tany amin'izy ireo.
53% amin'ireo izay nanao izany dia nilaza fa nisaraka tamin'ny marika iray satria nandefa azy ireo tsy tapaka ny marika atiny tsy misy dikany amin'ny fantsona maro.
33% no milaza fa ny fisarahana dia vokatry ny fisian'ireo hafatra ireo generic loatra ary toa miharihary fa halefa amin'ny olona rehetra, tsy izy ireo ihany.
59% amin'ireo nohadihadiana dia nilaza fa indraindray mifidiana marika fifaninanana iray hafa tsotra noho ny tolotra na marketing voarain'izy ireo.
Tags: fitiavan'ny mpanjifafitiavanavaliny
13 Feb 2014 tamin'ny 1:46 maraina
Lahatsoratra tsara Doug… Tena manana hevitra eto ianao .. Misaotra nizara! ..